King County Connects - Charter Review Feedback Survey - Somali - Issue
Soo sheeg ra’yicelinta aad ka qabto Xeer qoraalka King County.
Waxaan maanta warqaddan kuugu soo diraynaa si aan kaaga codsanno in aad gargaar ka bixiso qaabaynta mustaqbalka maamulka ama dawladda King County. Iyadoo ay deggan yihiin 2.2 milyan oo qof, King County waa degmada 13aad ee qaranka ugu weyn. Inkastoo ay aqlabiyadda degganeyaashaasi ku nool yihiin mid ka mid 39ka magaalood ee King County ku yaalla, haddana degganeyaal tiradoodu ku dhowdahay rubuc milyan ayaa ku nool degaanno aanan raacsanayn degmada. Taas awgeed, maamulka King County waxuu hayaa kaalin gooni ah maadaama uu yahay adeegbixiye goboleed iyo weliba adeegbixiye maamul hoose. Sharciga gobolka ayaa masuuliyado gaar ah saara maamulka degmada, hase yeeshee, degganeyaasha King County ayaa xeer qoraal ansixiyey 40 sano ka hor kaasoo degmada xukun ballaaran ka siinaya degaanka.
Waxaan u baahan nahay gargaarkaaga si aan go'aanno uga gaarno jihada ay mustaqbalka u jeeddo King County. Fadlan naga caawi in aan:
Soo ogaanno isbeddellada ku yimaadda muuqaalka iyo qaab dhismeedka maamulka Degmada.
Heer hagaagsan ku bixinno hufnaanta iyo ka qaybgalka muwaadiniinta.
Hubinno in uu adiga si fiican kuugu adeego maamulka degmadaadu.
Xeer qoraalka degmada ayaa King County dastuur u ah. Waxuu xeer qoraalku qeexayaa qaab dhismeedka aasaasiga ah, waqti dheer ee maamulka degmada iyo nidaamka uu maamulka degmadu go'aannada ku gaaro. Waxuu xeer qoraalku matalayaa anshaxyada daruuriga ah ee masuuliyadda iyo wada xisaabtanka ee u yaalla adeegyada degaanka iyo gobolka, ka qaybgalka muwaadiniinta, iyo deegaan baadiye iyo magaalo iyo dhaqaale caafimaad qaba. Si loo hubiyo in dukumeentigan salka ah ee la isku hago uu sii matalo anshaxyada degganeyaasha King County, milkiileyaasha qoray xeer qoraalku waxay ku dareen nidaam wareega oo dib loogu eego, markaasoo si rasmi ah loogu magacaabo koox degganeyaal ah si ay dib ugu eegaan uguna taliyaan isbeddellada lagu sameeyo xeer qoraalka. Waxaa kooxdan loo yaqaannaa Guddiga Dib u eegista Xeer qoraalka (Charter Review Commission). Guddiga Dib u eegista Xeer qoraalka ee hadda waxaa la magacaabay bishii July, 2018, waxayna sanadka soo socda ka shaqayn doonaan dib u eegidda xeer qoraalka waxayna soo diyaarin doonaan warbixin ku talinaysa, haddii ay jiraan, isbeddellada lagu samaynayo xeer qoraalka King County.
Si ay shaqadayada u hagaan, Guddiga Dib u eegista Xeer qoraalku waxay qabanayaan gacanfidis ballaaran, adag oo bulshada ku toosan si ay u soo guraan fikradaha ku saabsan sida loo wanaajin karo ama loo beddeli karo xeer qoraalka, taasoo iyaduna markaa maamulka King County ka caawin karta in uu kordhiyo jawaabcelinta iyo waxtarka.
Annaga, oo ah wada guddoomiyeyaasha Guddiga Dib u eegista Xeer qoraalka sanadka 2018, waxaan kaaga marti qaadaynaa ka qaybqaadashada hawshan ama nidaamkan—waxaan kaaga
mahadnaqaynaa talooyinka iyo/ama ra'yicelinta laga yaabo in adiga ama ururkaagu aad ka qabtaan meelaha laga wanaajin karo xeer qoraalka King County.
Fadlan xasuusnow in aan rabno ra'yicelinta ku saabsan qaab dhismeedka iyo nidaamyada go'aan gaarista ee maamulka King County, halkii ay ka ahaan lahayd ra'yicelinta ku saabsan barnaamijyada iyo adeegyada gaarka ah ee degmadu ay bixiso. Guddigu waxay dhiseen bar internet halkaasoo aad wax dheeraad ah kaga baran karto xeer qoraalka aanad ku dhaafi karto faallooyin qoran: https://www.opentownhall.com/6828.
Waxaan garanaynaa qiimaha uu waqtigaagu kuu leeyahay, oo annaga oo taas fahansan ayaan ku weydiisanaynaa xoogaa daqiiqo ah sababtoo ah hawsha goonida iyo muhiimka ah ee ay qabtaan Guddiga Dib u eegista Xeer qoraalku—hawl lagu guulaysto oo keliya haddii ay xubnaha bulshadu dhammaantood waqti u qaataan ka qayb qaadashada nidaamka dib u eegista.
Waad ku mahadsan tahay waqtiga aad na siisay, oo fadlan noo soo sheeg haddii aan wax gargaar ah ku siin karno.